Halyeeyga reer Brazil ee Cafu oo ka hadlay farqiga u dhexeeya Cristiano Ronaldo iyo Vinícius Jr – Gool FM
Halyeeyga reer Brazil ee Cafu oo ka hadlay farqiga u dhexeeya Cristiano Ronaldo iyo Vinícius Jr
Dajiye February 18, 2019
(Real Madrid) 18 Feb 2019. Halyeeyga reer Brazil Cafu ayaa amaanay xidiga da’ada yar ay asku dalka kasoo wada jeedaan iyo kooxda Real Madrid ee Vinícius Júnior.
Vinícius Júnior ayaa ku guuleystay in uu boos ka helo shaxda kooxda Real Madrid, xili uu da’ayarka reer Brazil ciyaaray kulamo waaweyn ee sida kulankii El Clasico ee Barcelona iyo kulankii Atletico Madrid.
Hadaba Cafu oo xulkiisa Brazil kula soo guuleystay 2 jeer koobka aduunka ayaa sheegay:
“Layaab iguma ahan waxa uu sameenayo Vinícius Júnior, waan ogeynay awoodiisa, waa sax in wax walba ay haatan u socdaan si dhaqsi ah, laakiin taasi waa waxa ay caan ku tahay Brazil”.
“Waa sida Cristiano Ronaldo oo kale, weli waxaa jira farqi weyn ee u dhexeeya labada ciyaaryahan, Cristiano wuxuu taariikh ka sameeyay kooxda Real Madrid iyo xulkiisa qaranka Portugal, laakiin Vinícius waxa uu heystaa wax walba uu taariikh kaga sameyn karo Real Madrid”.
“Waa inuu diirada saaraa kubada cagta, wuxuu leeyahay hami weyn, kuma filna inuu sameeyo kaliya ciyaar fiican ama heer qurxoon, waxaa saaran mas’uuliyad inkasta uu yahay xidig da’ayar ah”.
“Ciyaartoyda reer Brazil ayaa loo adeegsadaa inay dhabarka saartaan mas’uuliyada noocaan oo kale ah iyo in ka badan, gaar ahaan marka ay sheekada quseyso kooxaha waaweyn ee sida Real Madrid oo kale”.
“Ma dareemeyno maqnaanshiyaha Virgil van Dijk” - Alisson Becker
DAAWO MUUQAAL: Maxaa helay kulankii SOMALIA vs ERITREA ee Shalay lagu waday inuu ka dhoco MUQDISHO?